XAFLADII MINNESOTA EE XUSKA 18 MAY ( DAAWO SAWIRO) | Toggaherer's Weblog
Xafladii Minnesota aa xalay (Mahaa tii dhacaday labo sano ka hore ee Somaliland.ORG la soo galiyay) Oo Si Heer Sare Ah U Dhacday Iyo Gudoomiyihii Jaaliyada Somaliland Ee Minnisota Xasan Yonis Iyo Ururka Dhalinayarad Somaliland aa Minnesota Oo Hadalo Ka Jeediyay.
Waxaa xalay ka dhacday Suhuura Alsharaayan oo ku yaala konfurta magaalada Minneapolis (Not Sharatona Hotel) Xaflada oo Abdixakim Xaji Saciid uu ayad quran ah noogu furay, waxa ka soo qaybgalay dadwayne badan.
Waxaa xaga hadalo iyo guubaabino ka soo jeediyey Gudoomiyaha Jaaliyada Minnesota Mudane Xasan Yonis iyo odayasha magaalada Minneapolis Ibrahim aayo iyo Prof: Maxamed Albari. Waxaa kaloo halkaa ka hadlay Gudoomiyaha aqoonyahan badan, waxaanay dhamaantood ummada Somaliland u rajeeyeen horumar iyo badhaadhe inuu sanadkaa sanadka xiga ku gaadhsiiyo, lagan gudbo ururda iyo shakhsiyadnimada ayaa wadaan dadka qaarkood.
Waxa kale oo Gudoomiyaha Jaaliyada Minneapols-MN uu ka hadalya wararkii baanta ahaa, am been abuurka ahaa aa la soo galiyaya Hadhwanaagnews. Waxa uu Gudoomiyaha ku tilmamay in anaay Hadhwanaagnews wadin danta umada Somaliland aa ay wado iska horkaan iyo Somaliland burburis.
Because hadii ay Hadhwanaagnews daneynayso ummad Somaliland aa ku dhaqan Minnapolis-MN iy iyo Sweden waayo waay hubsan lahaayeena waxa jira iyo wararka loo soo diray in aay been abuur yihiin. Hadal iyo dhamaan waxaanu qaban doona shir jaraa’id oo aanu kaga hadli doono waxa jira iyo nimanka waad bur burka.
Masuuliyiintaasi waxay dadka ka codsadeen in layska ilaaliyo wixii keenaya tafaraaruq oo ay iska ilaaliyaan kuwa xumaha wada ee dadka kala qaybinaya. Xafladani may ahayn ta keliya ee magaalada ka dhacday laakiin waxaa jirtay xaflad ka dhacday Suhra Shrine .
wallow la sheegayo in isqabqabsi ka dhacay oo aan dadbadani tegin, eeda dhibaatadana waxaa korka laga saarayaa dhalinyaro magaalada ku cusub oo isqab qabsi magaalada ku soo kordhiyay iskuna haysta gacan ku haynta ururka ardayda Minnesota.
Minneapolis-MN waxaa ka dhacaday one Somaliland Party oo aay soo abaabulaan ururka ardayda jaamacadah Somaliland ee Minnesota. Waxa rabshaad aahi ka maay dhiciin. Daawo Sawiraadi Xalaay Aan ku qaaday Mobile phone kaayga.
I reporter – Badawi